मनै रुवाउँने दुखद् खबर, यसरी भारतले जबरजस्ती फर्कायो नेपालीलाई, चल्यो रुवाबासी ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/मनै रुवाउँने दुखद् खबर, यसरी भारतले जबरजस्ती फर्कायो नेपालीलाई, चल्यो रुवाबासी !
यो पनि पढ्नुहोस : आर्सनलको संघर्षपूर्ण जित !
एजेन्सी- इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आर्सनलले संघर्षपूर्ण जित निकालेको छ ।आइतबार राति भएको खेलमा आर्सनलले म्यानचेस्टर युनाईटेडलाई १-० गोलको झिनो अन्तरले पराजित गरेको हो । युनाईटेडको मैदानमा आर्सनललाई जित दिलाउन पिएरे इमिरिक औबामियाङले निर्णायक गोल गरे ।खेलको ६९औँ मिनेटमा औबामियाङले पेनाल्टीबाट निर्णायक गोल गरेका हुन् ।
युनाईटेडका पाउल पोग्बाले आफ्नो पेनाल्टी क्षेत्रमा हेक्टर बर्लिनलाई फउल गरेपछि आर्सनलले पेनाल्टी पाएको थियो । जसमा औबामियाङले सहज गोल गरे ।जितसँगै आर्सनलले ७ खेलमा १२ अंक तालिकाको आठौँ स्थानमा रहेको छ ।
यो पनि : रोनाल्डोको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा युभेन्टसको शानदार जित ।एजेन्सी- स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि इटालियन सिरी ‘ए’ फुटबलमा साविक विजेता युभेन्ट्सले शानदार जित हात पारेको छ ।
आइतबार राति भएको खेलमा युभेन्ट्सले स्पेजियालाई उसैको मैदानमा ४-१ गोलले पराजित गरेको हो ।युभेन्ट्सको जितमा क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दुई गोल गरे । कोरोना भाईरसको संक्रमणबाट मुक्त हुँदै मैदान प्रवेश गरेको पहिलो खेलमै रोनाल्डोले दुई गोल गरेका हुन् ।यस्तै अल्भारो मोराटा र एड्रियन राबिओटले एक एक गोल गरे ।
घरेलु टोलीका टोमासो पोबेगाले एक गोल फर्काए ।जितसँगै युभेन्ट्सले ६ खेलमा १२ अंक जोडेको छ । युभेन्ट्स दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।स्पेजिया ६ खेलमा ५ अंक जोडेर १६औँ स्थानमा रहेको छ ।